Isidumo uKhuzani ejijimeza uNgizwe - Ilanga News
Home Izindaba Isidumo uKhuzani ejijimeza uNgizwe
Kucishe konakala umcimbi kaShwi noMtekhala
KUSUKE isidumo ngo-Mgqibelo eVosloorus Stadium, eGoli, emcimbini weqembu lomculo ka-maskandi, uShwi noMtekhala wokugubha iminyaka ewu-20 liyibambile emculweni, ngesikhathi umculi, uKhuzani “Ndlamlenze” Mpungose evinjwa esesho ukulikhuza phezulu ngesikhwili kuNgizwe Mchunu wodumo loKhozi FM.
UNgizwe sewasungula owakhe umsakazo, iNgizwe FM, esakaza umculo wesintu kuYouTube.
INdlamlenze ivinjwe isigqunqe imnyama ngenxa yentukuthelo, ifuna ukuphenduka iNdlanhloko yaseMachunwini nje, uNgizwe ubephethe uhlelo okuthe uma sekufanele kungene lo mculi esiteji, washenxa wabiza uKhathide “Tshathugodo” Ngobe ukuba kube nguyena ozomethula.
UKhuzani ungene esiteji wacula, kuthe eseqedile wabonga ukufakwa nguTshatha esiteji, wathi ubengeke yena ethulwe ngabaphathi bohlelo abangagezi okubukeke njengokuthi imbuzi igudla iguma, inkulumo iqonde ngqo kuNgizwe.
Emuva kwalokho, uKhuzani uphume esiteji wahamba, wabuya emuva kwemizuzwana esephethe induku eqonde ngqo kuNgizwe obengemuva kwesiteji. Ubelokhu emkhomba esho amaganyana ayinhlamba.
UNgizwe akazange azame ukulwa, kodwa naye uphindisele ngenhlamba kwasho ukuthi uKhuzani usevele uvinjiwe, akasakwazi ukufinyelela kuyena. Kwenzeka lokhu nje, uKhuzani ukhiphe i-albhamu ngoLwesihlanu olwedlule eshiya angalazi kuNgizwe.
Uveze ukuthi ukubona kwakhe uNgizwe kulo mcimbi kumcasule kakhulu ngoba usebukise ngaye emphakathini, engcolisa igama lakhe. Uthi akumphathanga kahle okwenziwa nguNgizwe eqopha isithombe-mnyakazo (video) ngoMfumfu (October) emsola ngokuthi uthathe i-poster yomcimbi wakhe (uNgizwe) owawuseCurries Fountain Sport Development Centre, eThekwini, mhla ka-2 kuLwezi (November), wayibhala ukuthi kawusekho (umcimbi).
Uthi okunye okungazange kwehle kahle, wukuthi kusona lesi sithombe-mnyakazo uNgizwe wathi wayemnabukelisa yonke le minyaka, ehlulwa nguMthandeni “iGcokama Elisha” Manqele ngo-mculo.
UNgizwe uthi akathandanga ukuphakamisa umoya emcimbini kaShwi noMtekhala ngoba ekugcineni bekuzosolwa yena nje-ngomuntu omdala.
“Bengingafuni ukuphazamisa ingqophamlando yomcimbi wo-Shwi. Ngibonile ukuthi ubefuna ukusebenzisa mina ukuze aphushe i-albhamu yakhe,” kusho uNgizwe.
Kusuka lesi siwombe nje, bekubhekwe ngabomvu ukuthi kungasuka impi phakathi kukaSAKWALUSWAZI78777NTshatha nonjiniyela wabaculi bakamasikandi osebenza eTakk Studio, uMnu Thuthani Ndlovu, kodwa akuzange kwenzeke lokho.
UTshatha ungene esiteji wazihlekisela abantu, wathi usefikile emcimbini, abantu bangabuza noma yini kuyena. Ukusho lokhu nje, kuzokhumbuleka ukuthi uMnu Ndlovu ubefungile wathi bazodibana kuhle kwengwe nengonyama kulo mcimbi, ufuna uTshatha asho bukhoma lezi zinto ahlale ezikhuluma kabi ngaye.
Indaba yabo isukela kumculi kamaskandi, uMdumazi, owaxabana noMnu Ndlovu kubangwa intombi.
UMnu Ndlovu, obekhona kulo mcimbi, ufike wayohlala etendeni lezicukuthwane kwaze kwaba uTshatha umemezela ukuthi use-yahamba. Akekho ozame ukuya komunye.
Umcimbi kaShwi noMtekhala ubeyimpumelelo, abalandeli bebe-ziphethe kahle, kabazange bahluphe njengoba imicimbi yaseGoli idume ngezidubedube zokuqhuma kwezibhamu.
Lezi zihlabani zikamasikandi zinxuse ukuthula emculweni nokubambisana okuhle, zancoma ukwesekwa kwazo selokhu zasungula leli qembu ngo-2000.
Abantu bebephume ngobuningi kanti uShwi noMtekhala bebethula ngokusemthethweni ne-albhamu yabo entsha ethi, “Akaze Abuye”. Baqhulule amanoni abo amadala okubalwa kuwona elithi, “Ngafa” nelithi, “Awugobe”.
Abaculi abashiyelane inkundla kubalwa u-Ali Mgube, uDsD, uMthandeni, Abafana bakaMgqumeni, Amageza Amahle, uNgiga, uNtencane, Imithente, uMbuzeni, uDlubheke, Izingane Zoma, Amangcukumane, Amalabatheka, iMfezemnyama, uSgwebo Sentambo, uBobo Mfanawepiki, uJaivaziminike, uCheetah, uMnikezwa neNkosi Yamagcokama.
Previous articleIsilomo sikhuza ibuya kwiSibaya
Next articleIlanga 2-4 December 2019